40497 ဟယ်လိုဝိန်းဇီးကွက်မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
15 / 09 / 2021 16 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 42 Views စာ0မှတ်ချက် 40497 ဟယ်လိုဝှေး, Mandalore အပေါ် 75310 Duel, 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship, 75314 မကောင်းသောအသုတ်တိုက်ခိုက်မှုလွန်း, Ahsoka Tano ဖြစ်သည်, ဒင် Djarin, Grogu, ဟယ်လို, Lego, Lego ဟယ်လိုဝင်း, Lego Star Wars, Lego Star Wars ကြောက်စရာပုံပြင်များ, Lego YouTube, mandalorian, Star Wars, Star Warsဖြေ, Star Warsဖြေ, The Bad အသုတ်လိုက်, အဆိုပါ Mandalorian, YouTube ကို
16 / 08 / 2021 16 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 231 Views စာ 1 မှတ်ချက် 40493 Spider & Haunted House Pack, 40494 ပိုလာဝက်ဝံနှင့်လက်ဆောင်ထုပ်, 40497 ဟယ်လိုဝှေး, 40498 ခရစ်စမတ်ပင်ဂွင်း, ခရစ္စမတ်, ခရစ္စမတ်အဆင်တန်ဆာ, ခရစ်စမတ်သစ်ပင်, အားလပ်ရက်များ, အားလပ်ရက်, Lego, Lego ရာသီအလိုက်, ရာသီဉတုလိုက်သော
01 / 08 / 2021 01 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 429 Views စာ0မှတ်ချက် 10220 Volkswagen က T1 ကို Camper ဗန်, 10279 Volkswagen က T2 ကို Camper ဗန်, 10772 Mickey Mouse ၏ပန်ကာလေယာဉ်, 10773 Minnie Mouse ၏ရေခဲမုန့်ဆိုင်, 10774 Mickey Mouse & Minnie Mouse ၏ Space Rocket, 10775 Mickey Mouse & Donald ဘဲ၏လယ်ယာ, 10776 မစ်ကီ & Friends မီးသတ်ကားနှင့်ဘူတာရုံ, 21171 အဆိုပါမြင်းတည်ငြိမ်, 21172 အဆိုပါပျက်စီး Portal, 21173 က Sky မျှော်စင်, 21174 အဆိုပါခေတ်သစ် Treehouse, 21176 အဆိုပါတောတွင်းစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သော, ၂၁၃၂၈ Seinfeld, 31117 Space Shuttle စွန့်စားမှု, 31119 ကူးတို့ဘီး, 31120 အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်, 31121 မိကျောင်း, 31122 ငါး Tank, 40493 Spider & Haunted House Pack, 40497 ဟယ်လိုဝှေး, 41441 မြင်းသင်တန်းနှင့်နောက်တွဲယာဉ်, 41667 Olivia ၏ဂိမ်း Cube, 41668 မင်းသမီး Emma ရဲ့ဖက်ရှင် Cube, 41669 Mia ၏ Soccer Cube, 41670 Stephanie ရဲ့ဘဲလေး Cube, 41671 Andrea ရဲ့ရေကူး Cube, 41677 သစ်တောရေတံခွန်, 41679 သစ်တောအိမ်, 41681 သစ်တော Camper ဗန်နှင့် Sailboat, 41682 သူartအင်းအိုင် City ကြောငျး, 41683 သစ်တောမြင်းစီးခြင်းစင်တာ, 41684 သူartအင်းအိုင် City ဂရန်းဟိုတယ်, 41685 မှော် Funfair Roller Coaster, 41686 မှော် Acrobatics, 41687 မှော် Funfair ငျးကု, 41688 မှော် Caravan, 41689 မှော်ကူးတို့ဘီးနှင့်လျှော, 41693 Surfer ကမ်းခြေ, ၏ 41935 အများကြီး DOTS, 41936 ခဲတံကိုင်ဆောင်သူ, 41937 Multi Pack - နွေရာသီ Vibes, 41938 ကို Creative ဒီဇိုင်နာ Box ကို, 42128 အကြီးစား - Tow Truck ကား, 42129 4x4 Mercedes-Benz Zetros စမ်းသပ်ထရပ်ကား, 43109 သတ္တုနဂါး BeatBox, 43110 ရိုးရာနတ်သမီးပုံပြင် BeatBox, 43111 Candy ရဲတိုက်အဆင့်, 43112 Robo HipHop ကား, 43113 K-Pawp ဖျော်ဖြေပွဲ, 43114 ပန့်ခ် Pirate သင်္ဘော, 43115 အဆိုပါ Boombox, 43194 အန္နနှင့်အဲလ်ဆာရဲ့အေးစက်နေတဲ့ Wonderland, 43196 Belle နှင့်သားရဲ၏ရဲတိုက်, 60300 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး ATV, 60301 တောလမ်းမပေါ်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေး, 60302 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစစ်ဆင်ရေး, 60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း, 60308 ပင်လယ်ကမ်းခြေရဲနှင့်မီးသတ်အဖွဲ့, Luigi St နှင့်အတူ 71387 Adventuresartသင်တန်း, 71388 သူဌေးက Sumo Bro Topple မျှော်စင်ချဲ့ခြင်းအစု, 71389 Lakitu က Sky ကမ္ဘာ့ချဲ့စက်, 71390 Reznor Knockdown တိုးချဲ့သတ်မှတ်မည်, 71391 Bowser's Airship ချဲ့စက်များ, 71392 ဖားမာရီယို Power-Up ကို Pack ကို, 71393 ပျားမာရီယို Power-Up ကို Pack ကို, 71394 အက္ခရာအထုပ် - စီးရီး 3, 71734 ကေ၏ Blade သံသရာ, 71739 Ultra Sonic Raider က, Destiny's Bounty ၏နောက်ဆုံးပျံသန်းမှု, 71750 လွိုက်ရဲ့ Hydro Mech, ၇၁၇၅၂ Ninja Sub Speeder, 71753 မီးသတ်နဂါးတိုက်ခိုက်မှု, 71754 ရေနဂါး, 71755 အဆုံးမဲ့ပင်လယ်၏ဘုရားကျောင်း, 71756 ရေအားလျှပ်စစ် Bounty, 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း, 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, Mandalore အပေါ် 75310 Duel, 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder, 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship, 75314 မကောင်းသောအသုတ်တိုက်ခိုက်မှုလွန်း, 75315 Imperial အလင်း Cruiser, ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter, 76186 အနက်ရောင် Panther နဂါး Flyer, 76189 Captain America နှင့် Hydra Face-Off, ၇၆၁၉၀ Iron Man: Iron Monger Mayhem, ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, 76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, ၇၆၃၈၆ HogwartPolyjuice Potion မှားယွင်းမှု, ၇၆၃၈၆ Hogwarts fluffy တှေ့ဆုံ, 76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ်, ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း, ၇၆၃၈၆ HogwartWizard ရဲ့စစ်တုရင်, 76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger, 76394 Fawkes Dumbledore ရဲ့ Phoenix, ၇၆၃၈၆ Hogwartပထမပျံသင်ခန်းစာ, City, ဖန်ဆင်းရှင်, Creator 3-in-1, Creator Expert, Disney, DOTS, Friends, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Ideas, Lego, Lego CIty, Lego ဖန်တီးသူ, Lego Creator 3-in-1, Lego Creator Expert, Lego Disney, Lego DOTS, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Friends, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Ideas, Lego မှ marvel, Lego Minecraft, Lego Ninjago, Lego ရာသီအလိုက်, Lego Star Wars, Lego စူပါမာရီယို, Lego Technic, Lego Vidiyo, LEGO.com, Marvel, Minecraft, Ninjago, ရာသီဉတုလိုက်သော, စျေးဝယ်, Star Wars, စူပါမာရီယို, နည်းပညာ, အဆိုပါ LEGO Group, Vidiyo
01 / 08 / 2021 30 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 208 Views စာ0မှတ်ချက် 40493 Spider & Haunted House Pack, 40497 ဟယ်လိုဝှေး, ပထမဦးစွာမျှော်, ဟယ်လို, Lego, Lego ဟယ်လိုဝင်း, Lego ရာသီအလိုက်, Sets အသစ်များ, ဇီးကွက်, ရာသီဉတုလိုက်သော
ကြောက်စရာကောင်းသော LEGO အစုံအသစ်နှစ်တွဲကိုယခုနောက်ဆုံးပေါ်တရားဝင် online store တွင်ရနိုင်သည်
01 / 08 / 2021 01 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 252 Views စာ0မှတ်ချက် 10220 Volkswagen က T1 ကို Camper ဗန်, 10279 Volkswagen က T2 ကို Camper ဗန်, ၂၁၃၂၈ Seinfeld, 40493 Spider & Haunted House Pack, 40497 ဟယ်လိုဝှေး, 42128 အကြီးစား - Tow Truck ကား, 42129 4x4 Mercedes-Benz Zetros စမ်းသပ်ထရပ်ကား, Luigi St နှင့်အတူ 71387 Adventuresartသင်တန်း, 71388 သူဌေးက Sumo Bro Topple မျှော်စင်ချဲ့ခြင်းအစု, 71389 Lakitu က Sky ကမ္ဘာ့ချဲ့စက်, 71390 Reznor Knockdown တိုးချဲ့သတ်မှတ်မည်, 71391 Bowser's Airship ချဲ့စက်များ, 71392 ဖားမာရီယို Power-Up ကို Pack ကို, 71393 ပျားမာရီယို Power-Up ကို Pack ကို, 71394 အက္ခရာအထုပ် - စီးရီး 3, 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း, 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, Mandalore အပေါ် 75310 Duel, 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder, 75312 Boba Fett ရဲ့ Starship, 75314 မကောင်းသောအသုတ်တိုက်ခိုက်မှုလွန်း, 75315 Imperial အလင်း Cruiser, ၇၅၃၁၆ Mandalorian Starfighter, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76200 Bro Thor ရဲ့ New Asgard, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, ထိန်းချုပ်မှု +, Creator Expert, Ideas, Lego, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Ideas, Lego မှ marvel, Lego ရာသီအလိုက်, Lego Star Wars, Lego စူပါမာရီယို, Lego Technic, LEGO.com, Marvel, ရာသီဉတုလိုက်သော, စျေးဝယ်, Star Wars, စူပါမာရီယို, နည်းပညာ, အဆိုပါ LEGO Group, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
သင်၏ LEGO စုဆောင်းမှုကို Halloween အစုံသစ်များဖြင့်ဆွဲဆောင်ပါ
01 / 08 / 2021 28 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 231 Views စာ0မှတ်ချက် 10228 သရဲခြောက်တဲ့အိမ်, 40493 Spider & Haunted House Pack, 40497 ဟယ်လိုဝှေး, သြဂုတ်လ, ဟယ်လို, Lego, Lego ဟယ်လိုဝင်း, Lego ရာသီအလိုက်, Sets အသစ်များ, ရာသီဉတုလိုက်သော
ဒီနှစ်ရဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်ကဒီမှာပြီးခါနီးပြီ LEGO Groupaနှင့်အတူ Halloween ကိုစောစောစီးစီးကျင်းပသည်
Lego Star Wars 75319 The Armourer's Mandalorian Forge သည် LEGO.com မှအတည်ပြုခဲ့သည်
30 / 07 / 2021 30 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 283 Views စာ0မှတ်ချက် 40493 Spider & Haunted House Pack, 40497 ဟယ်လိုဝှေး, 75314, 75319 The Armorer's Mandalorian Forge, 75319 အဆိုပါ Armourer ရဲ့ Mandalorian Forge, ဆောက်လုပ်ရေးညွှန်ကြားချက်များ, ဒင် Djarin, Disney+, Lego, Lego Star Wars, LEGO.com, Paz Vizsla, Star Wars, Star Warsဖြေ, Armourer, အဆိုပါ LEGO Group, အဆိုပါ Mandalorian
အဆိုပါ LEGO Groupအွန်လိုင်းအဆောက်အ ဦး ညွှန်ကြားချက်များဝန်ဆောင်မှုသည်အခြား LEGO အကြောင်းအပြည့်အစုံဖော်ပြခဲ့သည် Star Wars set 75319 အဆိုပါ
Lego ကောလာဟလ Marvel Collectible Minifigures စီးရီးသည် LEGO.com တွင်ပေါ်လာသည်
26 / 07 / 2021 26 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 403 Views စာ0မှတ်ချက် 30392 Hermione ရဲ့လေ့လာမှု Desk, 40497 ဟယ်လိုဝှေး, အသက် 71029 စီးရီး 21, 71030 Looney တီးလုံး, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Minifigures, Lego ကောလာဟလများ, Lego ရာသီအလိုက်, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, ကောလာဟလာ, Spider-Man, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်
Collectible Minifigures အသုတ်အသစ်တစ်ခုကိုပေါ်လာသည် LEGO Groupအပြည့်အဝထုတ်ဖေါ်အကြံပြုခြင်း၏အဆောက်အ ဦး ညွှန်ကြားချက်ပေါ်တယ်
LEGO Halloween 2021 အစုံလိုက်ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကြည့်ရှုပါ
22 / 07 / 2021 23 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 259 Views စာ0မှတ်ချက် 10228 သရဲခြောက်တဲ့အိမ်, 40493 Spider & Haunted House Pack, 40497 ဟယ်လိုဝှေး, ပထမဦးစွာမျှော်, ဟယ်လို, Lego, Lego ရာသီအလိုက်, ရာသီဉတုလိုက်သော, Tiago Catarino, YouTube ကို
LEGO Halloween 2021 အစုံနှစ်ခုလုံး၏ပထမဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်မှုများသည်အွန်လိုင်းပေါ်သို့ကျရောက်ခဲ့ပြီးကြောက်မက်ဖွယ်ရာသီအလိုက်ပါ ၀ င်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကိုဖော်ပြခဲ့သည်။